Zvemukati - Prairie State Legal Services
MUTEMO WEMUDZIDZO WEKUDZIDZA
Prairie State inogara ichitora gore rechikoro uye emutemo wezhizha vadzidzi vevadzidzi pane imwe neimwe yemahofisi emuno (Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, uye West Suburban), uye anotevera anokosha mapurojekiti : Rubatsiro rweMutemo rweVaridzi Veimba (West Chicago neWaukegan); Yakaderera Inowanikwa Mutero Kiriniki (West Chicago); uye Fair Housing Project (Waukegan, Rockford, uye Peoria).
Vadzidzi veMutemo vanoita mabasa akasiyana siyana kuPrairie State zvinoenderana nezvavanowana padanho uye zvido zveimwe hofisi kana chirongwa. Aya mabasa anogona kusanganisira kubvunzurudzwa kwevatengi uye kuongorora kwenyaya; kunyorwa kwekuteterera, memorandamu nemapfupi; tsvakurudzo yepamutemo; nekutaurirana. (ONA: Vadzidzi veMutemo vane yakaganhurirwa tsika rezinesi pasi peIllinois Dare Repamusorosoro Mutemo 711 vachawedzera mukana wekuti vaoneke mudare redzimhosva.) Basa rese rinotariswa negweta rine ruzivo. Prairie State inopa kazhinji mikana yekudzidzira kune vadzidzi.
Prairie State inonzwisisa kuti vadzidzi vazhinji vanotsvaga kushanda munzvimbo inofarirwa neveruzhinji havagone kugamuchira chinzvimbo chisina kubhadharwa. Kushanda pamwe chete nePILI nevamwe vanobhadhara mari, isu tinokwanisa kupa yakashomeka nhamba yezvikoro zvemutemo zvakabhadharwa. nhamba uye nzvimbo yezvinzvimbo izvi zvinosiyana zvichienderana nemikana iripo yemari. Dunhu rePrairie rinogamuchirawo zvikumbiro zvekudzidzira kubva kuvadzidzi vezvemutemo vane mari yekunze kana kutsvaga chikwereti chechikoro, kana avo vanongoda kuzvipira nguva yavo.
Kunyorera mudzidzi wezvemitemo kudzidza, ndapota dzoka kune ino peji panguva yedu yakavhurika yekushandisa hwindo, pakati paZvita 15 naFebruary 15. Kana iwe uine mibvunzo, unogona kubata runhare rwePrairie State revatariri vekudzidzira kuti uwane rumwe ruzivo pa [email inodzivirirwa].
UNDERGRAD UYE PARALEGAL INTERNSHIPS
Prairie State inogara ichiita gore rechikoro uye vadzidzi vezhizha pane imwe neimwe yemahofisi ayo emuno (Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, uye West Suburban), uye anotevera mapurojekiti akakosha: Zvepamutemo. Rubatsiro rweVaridzi vePamba Purojekiti (West Chicago uye Waukegan); Yakaderera Inowanikwa Mutero Kiriniki (West Chicago); uye Fair Housing Project (Waukegan, Rockford, uye Peoria).
Vanoshanda mukati vanoita mabasa akasiyana siyana kuPrairie State zvichienderana nezvavanowana padanho uye zvido zveimwe hofisi kana chirongwa. Paralegal interns vanogona kubvunzurudza vatengi, kunyora kukumbira, kuita ongororo yepamutemo, uye kubatsira magweta mukugadzirira kutongwa.
Dunhu rePrairie rinogashira kunyorera internship kubva kune avo vari undergraduate kana vadzidzi vepamutemo vane mari yekunze kana kutsvaga chikwereti chechikoro, kana avo vanongoda kuzvipira nguva yavo. Nehurombo, isu hatigone kupa yakabhadharwa internship kune undergraduate uye vepamutemo vadzidzi.
Bata Prairie State Director weVazvipiri Services kuti uwane rumwe ruzivo. (e-mail: [email inodzivirirwa])
NDINODZIDZA KUTI: Hatisi kubvuma nyowani undergraduate kana vepamutemo vadzidzi internship zvikumbiro kudzamara tavhurazve mahofisi edu, sezvo vazhinji vashandi vachiri kushanda vari kure nekuda kwedenda re COVID-19.
Yemahara Virtual ZveMutemo Mharidzo! Illinois vakuru varidzi vedzimba (uye nyanzvi dzinoshanda nevaridzi vedzimba), dzidza kana reverse regeji yakakukodzera. Joinha Prairie State nyanzvi dzezvemitemo neChipiri, Chivabvu 18, kubva 3:00 kusvika 4:15 pm, kuti uwane tarisiro yekutanga yemibvunzo inowirirana yekukweretesa mari uye zvinetswa, zvinosanganisira: • Ndiani anokodzera uye kuti zvinoshanda sei • Zvakanakira uye zvinokanganisa • Kudzivirira kudzoreredza regeji kubvutwa Ndezvipi zvakasiyana panguva yedambudziko re COVID-19 Bhalisa, apa: register.gotowebinar.com/register/840314270114339851	... Ona ZvimweOna Zvishoma